Nagu saabsan - Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd.
Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd. waa shirkad warshadeed iyo ganacsi isku -dhafan wax -soo -saarka iyo iibinta. Kaabayaasha waxaa ka mid ah Zhongshan Lande Steel Ball Co., Ltd. iyo Shanghai Lande Synergies Co., Ltd. Waxay inta badan ku hawlan tahay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga ee saamaynta iyo kubadaha birta saxda ah. Badeecadaha ugu waaweyn waa saa'idka kubbadda jeexdin qoto dheer, saa'idka rullaluistemadka duuban, saa'idka rullaluistemadka, saa'idka rullaluislaha is -toosinta, cirbadaha duubista irbadda, saa'idka kubbadda riixidda, kubbadda birta chrome, kubbadda birta kaarboon, kubbadda birta aan lahayn iyo wixii la mid ah . Waxaa laga dalbadaa baabuurta, mootooyinka, qalabka guryaha, tolidda iyo mashiinnada korontada, aaladaha isboortiga, qalabka korontada iyo qalabka kale ee farsamada. Waxaa si ballaaran loogu dhoofiyaa daraasiin dalal iyo gobollo ah sida Yurub, Ameerika, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Waxaa si weyn loo aamminsan yahay oo ay nagu taageersan yihiin macaamiisha adduunka oo leh tayadayada ugu fiican iyo adeegga dhabta ah.
Zhongshan Lande Steel Ball Co., Ltd. waa soo -saaraha gaarka ah ee Shiinaha ee leh khadka wax -soo -saarka oo dhan oo ka socda Jarmalka. Dhammaan tas -hiilaadka ku jira cinwaanka qabow, shiidi dhalaalaya, shiididda adag, dhoobada koowaad, labbiska labaad, nadiifinta iyo xirxiridda waxaa laga keenaa SMS -ka Jarmalka. Xarunta daaweynta kuleylka waxay ka timaadaa Schwarz ee Jarmalka. Waxay ku takhasustay kubbado bir ah oo sax ah oo kala duwan, cabbirkoodu wuxuu u dhexeeyaa 1.00mm illaa 25.40mm, heerka saxnaanta laga bilaabo Fasalka 5 illaa Darajada1000.
Shanghai Lande Synergies Co., Ltd. waa laanta lagu aasaasay Shanghai. Waxay inta badan ku hawlan tahay soo dejinta iyo dhoofinta alaabada birta iyo alaabada laxiriirta, alaabada dhoobada, alaabada dhalada, alaabada caaga ah, alaabada qalabka, gawaarida iyo agabka mootada iyo wixii la mid ah.
U hoggaansanaanta falsafadda ganacsi ee “marka hore tayada, sumcadda marka hore, adeegga marka hore”, waxaannu dhidibnay xiriir iskaashi oo ballaadhan oo macaamiisha gudaha iyo dibaddaba ah, iyo weliba sumcad wanaagsan. Waxaan leenahay saldhig dhaqaale oo xooggan, ilaha wax soo saarka hodanka ah, koox adeeg oo aad u fiican. Anaguna waxaan diyaar u nahay inaan si wada jir ah ula shaqeyno saaxiibbada adduunka si aan u abuurno mustaqbalka!
Kubadaha Copper -ka Yar, Kubadda naxaasta ee H65, Kubadda naxaasta, H62 Kubadda Naxaasta, Madax Ball Check naxaas, Kubbadda Naxaasta ee Adag,